Global Voices teny Malagasy » Manampy Amin’ny Fanoratana ny Tantaran’ireo Mpampanofa Vatana Ao Ogandà · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Jona 2017 13:09 GMT 1	 · Mpanoratra Prudence Nyamishana Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Afrika Mainty, Oganda, Mediam-bahoaka, Sendikà, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge
Raha manontany ahy ianao momba ny antony anoratako ato amin'ny bilaogiko  ny diarin'ny vehivavy iray mpampanofa vatana, dia mety hovaliako hoe resaka fitia te-hahalala fotsiny no nanaovako izany. Nandre tantara aho hoe ao Bwaise, tanàna iray tsizarizary ao avaratr'i Kampalà, misy mampanofa ny vatany amin'ny vola zara raha 500 Uganda shillings (US$0.14) monja ireo vehivavy. Tiako ho ny sofiko mihitsy no handre ny tantara, ary angamba hizara izany ho an'ireo mpamaky ny bilaogiko. Noho izany dia nantsoiko ny namako, Joseph, mpiasa sosialy izay niasa an-taona maro tao amin'io faritra io.
Rehefa navoakako ny tantarany , niteraka fanehoankevitra marobe tao amin'ny media sosialy . Nisaotra ahy nilaza ilay tantara ny sasany tamin'ireo mpaneho hevitra, tamin'ny filazàna fa hahazo tombony avy amin'izany ireo vehivavy. Ny sasany, anefa, nanontany ny antony nanosika ahy hanoratra momba ilay olana.
“Manana drafitra aho” https://t.co/NK9QaBcY3f  avy amin'i @nyapru1  <<Nampirotsaka ny ranomasoko ity iray ity>> 😞
Raha tany am-boalohany dia fitia te-hahafantatra fotsiny no nanosika ahy, ny fotoana laniko niresahana tamin'ireo vehivavy tao Bwaise dia nahafahako nahita olana lalimpàka izay tsy mbola novahàn'i Ogandà tanteraka. Ireo zavatra toy ny fanondrànana ankizy, ny fanandevozana ho amin'ny firaisana ara-nofo, ny tsy firaharahian'ny ray aman-dreny, ny fahantràna lalina, ny herisetra atao amin'ny vehivavy ary ny heloka bevava. Arakaraky ny niresahako tamin'ireo vehivavy no nahatsapako bebe kokoa fa ireo olana atrehan-dry zareo dia tena goavana lavitra noho izay noeritreretiko. Ary tena manempotra ilay izy: tena efa saika nitsoa-pàhana aho taorian'ny nandrenesako ilay tantara faharoa .
“Tsy maintsy miasa miaraka isika hanome fanantenana ireo tena marefo. Tena mahavaky fo ny tantaran'i Kemirembe . Ankehitriny ny Not For Sale dia efa misy ao Ogandà ary miasa betsaka mikendry ireo olona tratry ny toejavatra toy ny manjo an'i Kemirembe na ny mitovitovy amin'ny azy, hitondra firotsahana an-tsehatra amin'ny resaka sosialy sy izay hafa fandraisana andraikitra sosialy maharitra afaka hanolotra azy ireny asa hafa mendrika hatao fanolo.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/06/05/100496/
 ato amin'ny bilaogiko: https://prunyamishana.com/
 media sosialy: https://web.facebook.com/pru.nyamishana/posts/10213115342503990?pnref=story
 tantara faharoa: https://prunyamishana.com/2017/03/21/i-was-brought-from-the-village-to-work-as-a-housemaid-sexworkerdiaries/
 nilaza hoe:: https://prunyamishana.com/2017/03/14/please-dont-judge-me-for-selling-my-body-at-5000-ugx-sexworkerdiaries/#comment-159
 naneho hevitra tao amin'ilay lahatsoratra tao amin'ny bilaogy.: https://prunyamishana.com/2017/03/14/please-dont-judge-me-for-selling-my-body-at-5000-ugx-sexworkerdiaries/#comment-166